Alexa.com's Saiti Inotarisa: Zvitsva Zvipo Ipa Vashambadziri Zvirinani Mufananidzo weKutsvaga uye Mikana Yemukati, Yemahara | Martech Zone
Chipiri, July 9, 2019 Chipiri, July 9, 2019 Douglas Karr
Kune vashambadzi vanoshanda kuti vasvike vateereri vatsva pamhepo, ruzivo rwevanokwikwidza 'mabasa ekuvaka-makwikwi, kusimba uye kushaya simba, uye mikana yekusvika nekutora vateereri vavo inogona kutora chinzvimbo chine simba mukutyaira kubudirira. Nekudaro, iwo makwikwi ekujekesa anga achinyanya kuwanikwa kumakambani ane zviwanikwa zvihombe uye avo vega analytics zvikwata.
Alexa Nzvimbo Yekutarisa
The Alexa.com Saiti Ongororo sevhisi - iyo inoto shanda vanopfuura mamirioni matatu vashandisi vakasarudzika mwedzi wega - inopa yakanyanya-inoenderana data ine chekuita neayo mushambadzi webhusaiti, vateereri, uye keyword maburi nemikana. Iyo zvakare inopa yakafanana data pane chero inokwikwidza saiti. Panzvimbo pekuremedza vashambadzi vane huwandu hwedata husina kugadziriswa, husina kududzirwa, uye hunoda kuongororwa kwakawanda pasati pawana ruzivo, Saiti Yekutarisa sevhisi inoita ongororo yakaoma inodiwa otomatiki. Vashambadziri vanogona kuisa webhusaiti, uye Saiti Yepamusoro inodzosera runyorwa runyorwa rweakakosha mikana yeiyo saiti, uyezve runyorwa rwemawebhusaiti epamusoro anokwikwidza vateereri vesaiti, metriki yemasaiti saiti ichienzaniswa nevhareji yenzvimbo dzepamusoro dzinokwikwidza. , uye mamwe makwikwi nzwisiso.
Nekugonesa vashambadziri kuti vaone mikana apo vakwikwidzi parizvino vari kushandisa mikana yakakosha yekusvitsa vateereri iyo yavo brand haisati yasvika, Saiti Yepamusoro inoita kuti zvive nyore kwazvo kune vatengesi kutora zviito zvinotsigirwa nedata.
"Mumakore mashoma apfuura, isu takatora matanho makuru kubatsira vatengesi vemajitari kutyaira chaiko mumasangano avo nekuwedzera kweangwara SEO, SEM uye zvemukati zvekuongorora kugona. Iyo nyowani yeSaiti Yekutarisa sevhisi ikozvino iri musimboti wevashambadziri vasina zviwanikwa zvekubata mafashama e data, asi vanoda nongedzo dzakananga uye dzinoshanda dzavanogona kuita nekukurumidza. Nekuchengeta mabheji pane vari kukwikwidza vari kuwana budiriro, vashambadzi vanogona kuwana yavo yekukwikwidza. "
Andrew Ramm, Mutungamiri we Alexa.com
Alexa Saiti Yekutarisa Zvimiro
Yakaburitswa muna Chikumi 27th, Sisitimu Yekutarisa nyowani hunyanzvi hwakagadzirirwa kupa vashambadziri ruzivo rwakagadzirira kuiswa mukuita, munzvimbo dzese dzinosanganisira mikana yakakosha yemazwi, kukwikwidza kuongorora, ruzivo rwevateereri, uye nhamba dzewebhu traffic:
Keyword mikana - Saiti Yekutarisa curates saiti kiyi kiyi kurudziro pamatanho akati wandei ekushongedzera vashambadziri uye vamiririri vane nekukurumidza zvemukati zano zano.
Mazwi akakosha: Inotsvaga mazwi akakosha parizvino ari kupa traffic kune vanokwikwidza, iyo saiti yemushambadzi isati yashandise
Nyore-kune-chinzvimbo mazwi akakosha: Chinangwa chakakurumbira mazwi akakosha ayo saiti yemushambadzi inofanirwa kuve iine simba rekukwikwidza kuti ubudirire kuverengerwa zvakanaka.
Mutengi mazwi akakosha: Inokurudzira mazwi akakosha anoshandiswa nenhengo dzevateereri vesaiti izvo zvingangotarisira kutenga.
Optimization mikana: Inozivisa akakosha mazwi akakosha parizvino anotyaira traffic kuenda kune yemusika saiti, asi inogona kukwidziridzwa kutyaira zvimwe.
Kukwikwidza kuongorora - Inopa mabhenji ekuenzanisa saiti yemushambadzi padivi-ne-padivi nevanokwikwidza.
Traffic zvinyorwa: Inofananidza iyo muzana yeinowani yekutsvaga injini traffic kune iyo mushambadzi saiti maringe nemakwikwi emasaiti.
Referral saiti (backlinks): Inofananidza huwandu hwekutumira nzvimbo dzinotyaira traffic kunzvimbo yemushambadzi maringe nemakwikwi emakwikwi.
Top keywords: Inoratidzira epamusoro ekutsvaga mazwi anotyaira traffic kuenda kunzvimbo yemushambadzi, uye neavo vanotyaira traffic kuenda kunzvimbo dzinokwikwidza.
Kunzwisisa kwevateereri - Inokurudzira mikana yakasarudzika yekusvika kune vangangove vatengi zvichibva saiti vateereri vanoongorora maitiro.
Vateereri zvido: Inotaridza zvikamu izvo vateereri vesaiti vanoona zvinonakidza, uye mamwe masosi anoshandira izvo zvido zvinoshanyirwa nevateereri.
Vateereri vanobatana: Inoziva nzvimbo dzinokwikwidza kutariswa kwevateereri vakagovana.
Traffic Statistics - Vashambadziri vanogona kuyedza kukurumbira kwenzvimbo, kuita, uye kukura kwesimba vachishandisa iko kutaurwa kwemameji esiti emwedzi nenhamba.
Alexa chinzvimbo: Inoratidza saiti yepasirese yepasi rese internet traffic uye chinzvimbo chekuita
Vateereri geography: Inotaridza huwandu hunofungidzirwa hwevashanyi vesaiti nenyika.
Saiti metrics: Inoratidza kubatanidzwa kwenzvimbo, traffic masosi, kuyerera kwenzvimbo, uye zviyero zvemashure zve backlink.
Kubatsira kweBrand neArhente Vatengesi
Vashambadziri veArhente vangangowanawo Saiti Ongororo yekuongorora saiti kugona kunokosha mukuvabatsira kuziva mikana yedhijitari yevatengi (zvine musoro kuwedzera kuchengetwa). MaAgency uye vanachipangamazano vanogona zvakare kukwidziridza Matunhu Ekutarisa maturusi, senge nyore-ku-chinzvimbo mazwi ekushandisa chishandiso, kunongedza vanotarisira vatengi kune nekuvandudza kwakanangana nenyaya yavo yekushandisa.
“Vanhu vanonzwa kugadzikana pavanoona kuti vakwikwidzi vari kuvarova pane chimwe chinhu. Iyi ndiyo inokurumidza nzira yekuona zviri kuvashandira kwete iwe. Kunyangwe ndikatarisa, ndawana zviito 3-4 zvandingatore kuti ndiwane migumisiro iri nani. ”
Andy Crestodina, co-founder uye Chief Marketing Officer we Orbit Midhiya
Nekupa kuoneka kutsva uye kwakadzika muzviitiko uye budiriro zvinofarirwa nevakwikwidzi, uye nekupa ruzivo rwakagadziridzwa runodiwa kuteedzera mikana zvinobudirira, Alexa.com's Site Overview inofanirwa kugonesa vashambadziri kuti vaite zvisarudzo zvine hungwaru uye voziva iwo iwo mukwikwidzi kubudirira kwavo.
Edza Alexa's Saiti Ongororo
Tags: alexa saiti yekuongororamutengi mazwi akakoshanyore-ku-chinongedzo mazwichishandiso chemaharakeyword mikanaobbit midhiya